Ibon Martín: waa kuma isagu, sida uu wax u qoro iyo buugaagta uu daabacay | Suugaanta hadda jirta
Xigasho Ibon Martín: Heraldo de Aragón
Ibon Martín waa mid ka mid ah qorayaasha Isbaanishka ee soo kordhaya. Haddii aad jeceshahay riwaayadaha leh khiyaanooyinka, qarsoodiga iyo wixii ka sarreeya, tani waa mid ka mid ah qorayaasha hadda, buugga soo baxa, buug guuleysta.
Laakiin, Waa kuma Ibon Martín? Waa maxay buugaagta aad qortay? Qalinkiiagu waa sidee Hadaadan maqal; ama haddii aad taqaanid isaga laakiin aad doonaysid inaad faahfaahin dheeraad ah ka ogaatid noloshiisa, markaa waxaan kaaga warrami doonaa qoraaga.
1 Waa kuma Ibon Martín
1.1 Ibon Martín oo ah qoraa curis ah
2 Qalinkaagu waa sidee
3 Buugaagta Ibon Martín
Waa kuma Ibon Martín
Xigasho: wargayska Basque
Ibon Martín waa suxufi. Wuxuu ku dhashay sanadkii 1976 magaalada Donostia wuxuuna bartay cilmiga saxaafada jaamacada wadanka Basque. Kadib markuu dhamaystay shahaadadiisa, sida inbadan oo kamid ah asxaabtiisa fasalka, wuxuu bilaabay shaqo. Shaqadiisii ​​ugu horreysay waxay ahayd warbaahinta maxalliga ah, taas oo fursad u siisay una adeegtay dhaqan ahaan inuu u adeegsado aqoontii uu kusoo bartay suuqa shaqada.
Sidaa darteed, iyo wax aan dad badani ogayn, waa taas Ibon Martín wuxuu bilaabay inuu wax ka qoro safarka. Isaga, waxay u ahayd dareen run ah, maxaa yeelay wuxuu jecel yahay safarka, iyo inuu awoodo inuu ka shaqeeyo wax aad jeceshahay ayaa had iyo jeer ka wanaagsan. Sababtaas awgeed, muddo dhowr sano ah wuxuu naftiisa u huray inuu wax ka qoro warbaahinta oo ku saabsan safarka iyo jidadka. Wuxuu qoray buugaag dhowr ah oo safarka ah, gaar ahaan jidadka loo maro Basque Country. Sidaa darteed, wuxuu noqday mid ka mid ah khubarada ugu fiican dalxiiska miyiga iyo madadaalada dalka Basque. Waana in buugaagtiisu aysan diirada saarin kaliya meelaha ugu caansan ee dhulka, laakiin ay sidoo kale soo heleen kuwa kale ee yar yar ee la yaqaan, kuwaas oo aan dalxiis ahayn laakiin xambaarsan waxyaabo kadis ah ama kugu kalifay inaad jacayl la yeelato xitaa in ka badan kuwii hore. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu siiyay talooyin badan iyo waxyaabo kale oo lagu beddeli karo jidadka ama siyaabaha loo maro, sida baabuur ama magaalo ka magaalo kale loo maro. Si tan loo sameeyo, wuxuu gacan ka helay Álvaro Muñoz Gabilondo, qoraa kale oo maxalli ah khabiirna ku ah meelaha iyo meelaha ay wax ka qoreen.
Ibon Martín oo ah qoraa curis ah
Muddo sanado ah, Ibon Martín wuxuu ku safray waddooyinka Basque Country wuxuuna naftiisa u huray daabacida hagitaannada safarka si meelahan loo ogeysiiyo, gaar ahaan soo celinta muhiimada ay mar uun lahaayeen. Waxayna ahayd buugaagtan uu ku been abuurtay fikradda buuggiisa ugu horreeyay, "Dooxada aan magac lahayn."
Tani Wuxuu doonayey inuu xididadiisa sii haysto oo uu si uun isugu daro hamigiisa safarka iyo ogaanshaha waxyaalaha ugu badan ee aan la garanayn ee muhiimka u ah aagga fikirkaas uu maanka ku hayay. iyo in yar oo yar ayay la soo baxaysay jilayaasha iyo dhagarta.
Xaqiiqdii, buuggaagtaas kadib, wuxuu sii waday daabacaadda, xaaladdan oo ah afar buug, oo loo dhigay khuraafaad iyo halyeeyo ka mid ah kaymaha Irati, oo ah riwaayad Nordic ah oo isaga kalliftay.
Xilligan, wuxuu sii wadaa qorista. Buuggiisii ​​ugu dambeeyay, "Saacadda gorgorrada", waxaa la daabacay 2021 iminkana wuxuu ku guuleysanayaa guul, isaga oo u xaqiijinaya inuu yahay madaxa shakiga. Xaqiiqdii, waxaa loo tixgeliyaa oo kaliya Spain, laakiin sidoo kale caalami ahaan ayaa uqalma sidan oo kale dhowr ajaanibta daabacan ayaa horeyba u eegay si ay ugu daabacaan shaqadooda luuqado kale.
Marka waxaan la kulanay qoraa waddo dheer oo hortiisa ah, oo hubaashii la yimid buugag badan oo waaweyn.
Qalinkaagu waa sidee
Xigasho: Huffington Post
Kuwa akhriyay Ibon Martín waxay isku raacsan yihiin isla faahfaahinta: wuu yaqaan sida loo xiro akhristaha. Qaabka loo muujiyo, sida ay u soo bandhigto jilayaasha iyo sida sheekadu u maleegayso waxay ka dhigeysaa inay sugaan inay raacaan si ay u ogaadaan waxa ku dhici doona jilayaasha, laakiin sidoo kale sirtaas oo aakhirka noqota mid caadi u ah akhristaha.
Waxa kale oo ay u taagan tahay, waayo ,. jawiga iyo duruufaha ay tilmaamayso, waa macquul oo run ah wixii la arki karo, in qaar badani go'aansadaan mararka qaarkood inay aadaan meelahaas si ay iyagu u arkaan (malaha sababo la xiriira xiriirkooda buugaagta safarka ee aan horay u qoray).
Intaas waxaa sii dheer, shaki kuma jiro inuu baaritaano badan ku sameeyo buugaagtiisa, maaddaama faahfaahinta iyo siyaabaha loo jilayo jilayaasha, iyo sidoo kale dhagarta iyo sirta lafteeda, ay leeyihiin aasaas. Sababtaas awgeed, wuxuu waqti badan ku bixiyaa cilmi baaris naftiisa ah si uu u awoodo inuu u faahfaahiyo sheeko-faneedka iyo in uusan jirin farah dabacsan oo "dhib" kara akhristaha.
Buugaagta Ibon Martín
Haddii aad hadda la kulantay qoraaga oo aad doonayso inaad ogaato buugaagta uu qoray, waxaan kuu sheegaynaa inuusan suuqa ku haysan tiro badan. Haddana. Waana in xirfadiisa suugaaneed ay bilaabantay 2013, markii uu soo saaray buugiisa ugu horreeyay, "Dooxada aan magac lahayn."
Qoraagan, sida kuwa kale oo badan, kaliya waxay daabacdaa hal sheeko sanadkiiba, waana in lagu xisaabtamo in sanuu 2018 uusan daabicin, marka waxaan leenahay amaahdiisa 7 buug oo uu qoray. Kuwani waa:
Doox aan magac lahayn.
Axdiga ugu dambeeya.
Qafis cusbo ah.
Qoob ka ciyaarka tulips.
Waa in la sheegaa in afar ka mid ah buugaagtaas - Qoob ka ciyaarka Tulip, Cage Cusbada, Akelarre-kii ugu dambeeyay iyo Warshaddii Hooska - waa qeyb ka mid ah ururinta Dambiyada Iftiinka.
Waxaan ka iftiimin karnaa buugaagta, tusaale ahaan, in Dance-ga Tulip uu ka sameeyay liisaska ugu wanaagsan ee iibiyaha, taasoo ka dhigtay xirfaddiisa inay ku kacdo hab meteoric ah qaar badanna waxay bilaabeen inay arkaan isaga oo ku dhex jira noocyada xiisaha leh ee gudaha iyo dibedda dalka. Si kastaba ha noqotee, maahan illaa Waqtiga loogu talagalay Seagulls in uu kasbaday cinwaanka mastarka shakiga.
Hadda oo aad inbadan ka garaneyso Ibon Martín, waxaa la joogaa waqtigii, haddii aadan waxba ka akhrin isaga, lagugu dhiirigeliyo inaad sidaas sameyso. Waxaad ku bilaabi kartaa buugiisa cusub, sidaasna waxaad ku ogaan kartaa horumarka uu qalinkiisu soo maray. Laakiin sidoo kale waxaad ku bilaabi kartaa kii ugu dambeeyay ee la dhajiyay oo, haddii aad jeceshahay, raadi kuwii hore. Marka laga reebo afartaas buug ee ka kooban Dambiyada Iftiinka, inta kale si madax bannaan ayaa loo akhrisan karaa. Haddii ay dhacdo inaad horey u taqaanay oo aad akhrisay, miyaad kula talinaysaa mid ka mid ah buugaagtiisa in ka badan kuwa kale? Waxaan jeclaan lahayn inaan war kaa maqalno!
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Ibon Martin
Carlos Ruiz Zafón: buugaag
María Dueñas: buugaag